बाबुरामको बौद्धिकतामा नेकपा अध्यक्षको कटाक्ष « Harekpal
बाबुरामको बौद्धिकतामा नेकपा अध्यक्षको कटाक्ष
कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर मात्रै उहाँको बौद्धिकताको र पिएचडीको अर्थ हुने हो– प्रचण्ड
नेपालमा धेरैले पिएचडी गरेका छन्, तर एकजनाले मात्रै गरेजस्तो गरी डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर भन्दिए उहाँलाई त्यसैले धोका दियो– ओली
कमरेड दीपक मनांगेजस्ता ‘बौद्धिक’ भएको ‘कमाउनिष्ट’ पार्टीमा अरू बौद्धिकहरू पनि आवश्यक पर्छ र ?–बाबुराम
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिक समकालीन नेतामध्ये बौद्धिक नेतामा गनिन्छन् । माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वकालअघि पनि उनको बौद्धिकताबारे विभिन्न मिथक सुनिन्थे । भट्टराईले सातवटा विषयमा पिएचडी गरेका छन् भनेर गाउँ–गाउँमा चर्चा हुन्थ्यो । त्यो मात्रै होइन, सिंहदरबारअगाडि रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवन बाबुरामकै डिजाइनिङमा भएको भनेर पनि चर्चा हुन्थ्यो ।
२०२८ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्डफस्र्ट भएका उनको चर्चा आवश्यकताभन्दा बढी गरिएको थियो । नत उनले सातवटा विषयमा पिएचडी गरेका हुन् । नत वाणिज्य बैंकको डिजाइन नै गरेका हुन् । यद्यपि उनी पिएचडी होल्डर इन्जिनियर पक्कै हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको डिजाइन गरेका छैनन् ।
बाबुरामको बौद्धिकताबारे राजनीतिक वृत्तमा अहिले पनि विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेकै छन् । अधिकांशले उनलाई बौद्धिकता भएको, तर सदुपयोग गर्न नजानेको नेताका रूपमा टिप्पणी गर्छन् ।
शुक्रबार बाबुराम अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीका केही प्रभावशाली नेता नेकपामा प्रवेश गरे । यसअघि नेकपाले बिहीबार आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई पनि पार्टी प्रवेश गराएको थियो । नेकपाकै समर्थनमा मनाङबाट प्रदेश सांसद बनेका मनाङेको नेकपा प्रवेशप्रति नेकपाकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराईले मनाङेलाई ‘कमरेड’ भन्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार समाजवादी पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले उनीहरूलाई नेकपामा स्वागत गरे । समाजवादी पार्टीका नेताहरु देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमलालगायतलाई धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पनि नेकपामा आउन आग्रह गरे ।
उनले बाबुरामको बौद्धिकताले अरू पार्टीका गएर सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको टिप्पणी समेत गरे । ‘बाबुरामजीको बौद्धिकताले अन्त गएर कहीँ सकारात्मक परिणाम दिएको देखिँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर मात्रै उहाँको बौद्धिकताको अर्थ हुने हो । उहाँको पिएचडीको अर्थ त्यहीँ हुने हो’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।
दाहालले बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, मोहन वैैद्य, विप्लव, चित्रबहादुर केसीलगायत नेतालाई नेकपामा समाहित हुन आह्वान गरे । पुराना नेताको बुद्धि मुलुकको हितका लागि, कम्युनिस्ट एकताका लागि लगाउन आफ्नो पार्टीमा समाहित भएर जानैपर्ने दाहालको भनाइ थियो । उनले पुराना नेताहरू आफ्नो पार्टीमा आए उचित सम्मान दिने वाचा गरे ।
तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्रचण्डको भन्दा फरक धारणा राखे । उनले बौद्धिकताले मात्रै राजनीति नहुने आशयको धारणा राखे । डिग्रीले क्रान्ति नगर्ने बताउँदै उनले डिग्रीको दम्भले स्वयं व्यक्तिलाई नै हानि गर्ने बताए । बाबुरामप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा धेरैले पिएचडी गरेका छन्, तर एकजनाले मात्रै गरेजस्तो गरी डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् ।’
बाबुरामलाई त्यही डाक्टरको पदवीले धोका दिएको ओलीको टिप्पणी थियो । उनले एउटा भ्यागुतोको उदाहरण दिँदै भ्यागुताले ठूलो पल्टिन भुँडी फुलाउँदै जाँदा भ्यागुताको भुँडी फुटेको भनेर बाबुरामको बौद्धिकताको खिल्ली उडाए ।
आफ्नो पाटीका नेतालाई नेकपामा प्रवेश गराएर नेकपाका नेताहरूले आफ्नै बौद्धिकताको खिल्ली उडाएपछि बाबुरामले पनि ट्विटरमार्फत जवाफ फर्काएका छन् । उनले लेखेका छन्– कमरेड दीपक मनांगेजस्ता ‘बौद्धिक’ भएको ‘कमाउनिष्ट’ पार्टीमा अरू बौद्धिकहरू पनि आवश्यक पर्छ र ?
यसअघि उनले समाजवादी पार्टी छाडेर नेकपा प्रवेश गर्न लागेका नेताप्रति टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए– राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारीताको ठूलो महत्व हुन्छ !’ जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो’ प्रवृत्तिले तत्काल केही लाभ त होला तर अन्ततः पश्चाताप सिवाय केही प्राप्त हुन्न ! उनले अगाडि लेखेका थिए– भात पाक्न केही ढिलो भयो भन्दैमा अखाद्य वस्तु खानेलाई स्वस्थ्यलाभको कामना बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र ?
राजनीति यस्तो विषय हो, जहाँ आफू र आफ्नो सिद्धान्तलाई उत्कृष्ट सावित गर्न नेताहरू सधैँ उद्यत रहन्छन् । यो अवसर र सम्भावनाको खेती पनि हो । किनभने हिजो ज्यानको बाजी थापेर सँगै हिँडेका प्रचण्ड र बाबुराम नदीका किनाराजस्ता भएका छन् भने एक–अर्कालाई देखिनसहने ओली र प्रचण्ड अहिले एउटै जुवामा नारिएर हिँडेका छन् ।